Coronavirus: Talyaaniga oo xaddidaado adag ku soo rogay goobaha lagu arkay caabuqaasi - BBC News Somali
Dowladda Talyaaniga ayaa waxa ay soo saartay "tallaabooyin culus" oo ay ku xakamaynayso in caabuqa coronavirus uu ku faafo qaaradda Yurub.
Ra'iisul Wasaare Giuseppe Conte ayaa gelinkii dambe ee Sabtida waxa uu ku dhawaaqay qorshe degdeg ah xilli tirada dadka uu caabuqaasi ku dhacay ay sare u kacday oo ay gaartay 79.
Ku dhawaad 50,000 oo qof oo ku sugan magaalooyinkaas gobollada waqooyi ayey mas'uuliyiintu waydiisteen in aanay guryahooda soo dhaafin.
Ra'iisul Wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte (Bartamaha ayuu fadhiyaa) ayaa sheegay in dadka aanan loo ogolaan doonin inay ka baxaan ama ay soo galaan deegaannada lagu arkay cudurka coronavirus
Mas'uuliyiinta Talyaaniga ayaa waxa ay ka cabsi qabaan in kiisaska cudurka lagu arkay gobollada Lombardy iyo Veneto ay dhaafeen habkii lagu go'doomin lahaa, taas oo adkaynaysa in la xakameeyo.
"Cudurku si aad u xoog badan ayuu u faafayaa," ayuu yiri madaxa caafimaadka ee gobolka Lombardy Giulio Gallera.
Mas'uuliyiinta caafimaadka ee Shiinaha ayaa ku warramay in Sabtidii ay hoos u dhacday tirada dhimashada iyo kiisaska cusub ee cudurka coronavirus qaba. Qiyaastii 76,392 kiis oo ay ku jiraan 2,348 dhimasho ayaa lagu diiwaangeliyay gudaha waddanka Shiinaha.
Hasayeeshee goobaha ka baxsan Shiinaha kiisas aanan xiriir cad la lahayn dalkaas iyo kuwo kale ayaa la xaqiijiyay inay sare u sii kacayaan, taas oo keentay walaac ku dhashay Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO.
Madaxa hay'addaasi WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayaa sheegay in walaaca ugu wayn ee haatan taagan uu yahay in cudurka uu gaaro dalalka hannaankooda caafimaadka uu liito, gaar ahaan qaaradda Afrika.
Ilaa iyo hadda laba bukaan oo qabay cudurka coronavirus ayaa ku dhintay dalka Kuuriyada Koonfureed